Akkamitti dhidhima kana keessa Deebinee Seenne? | Kichuu
Posted on March 24, 2019 by fmegersa
Damee Boruu tin, Bitootessa 24, 2019
Xiyaara Itoophiyaa dhiyyenya kufe yoo agartanii jiraatan lafatti kufee hin cacabne. Humna guddaan utuu deemaa jiruu waan mataa isaa ol qabachuu dadhabeef mataan dhidhima seene. Qabsoon Uummata Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoon hoogganamee Uummata Oromoo hundan ammatamee deemaa ture Wayyaanee of irraa buqqisee jira. Sana booda garuu Abbaa Biyyummaa Oromoo utuu hin mirkaneesiin dhidhima seenee baduuf akkuma xiyaara sanaa fiigaa jira.
Balaa biyyaa fi uummata keenyatti dhufaa jiruyoo yaroon agarree mataa keenya ol hin qabanne akkuma xiyaara sanaa dhidhima seennee daraa taana. Haalli kun akka dhufu kan godhee fi itti gaafatama isaa kan fudhatu akka namatti Kononeel Abiyi fi Obbo Lammaa dha. Kononeel Abiyi gaafa muudamu utuu waan tokko hin rakkatiin akeeka Miniliki bakkan gahuun qaba jedhe ka’uun burqaa rakkina sanyi Uummata Oromoo fi Oromiyaa balleessuu har’a agaamama jirutti. Itti dabalee Obboo Lammaa Magarsaa biyyaa Amhaaraa deeme utuu hin dibamiin “Itoophiyaan Suusii dha” jechuun rakkina guddaa argaa jiruuf isa lammaaffaa akka tahe hubatamu qaba. Bifa kamiin iyyuu balaa biyya sana keessatti dhufaa jiruuf namummaan kan itti gaafatamuu deemu: 1. Kononeel Abiyi Ahmed 2. Obbo Lamma Magrsaa 3. Nama Iskinder Naggaa jedhamu akka tahe hunduu beekuu qaba.
Hohiin Kononeel Abiyi fi Obbo Lammaa oftuulummaa Amhaaraa waggaa 27 dhukkana keessa turee abdii guddaan ifatti bahee akka lalisu godhee jira. Haala kana hubadhee OPDOn Wayyaanee ergamtuu taate Uummata Oromoo Saamaa fi saamsisaa, hidhaa fi hiisisaa, ajjeessaa fi ajjeesisaa kan turte xiqqaatee maaliif oftuultota Amhaaraa Oromoo iratti ijaaruun barbaachisaa tahe jedhee “Tokkoo hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee” gaafa 7/21/2018 barreesse. Baatii xiqqoo dura Amhaarii TPLF Walqaayitii fi Raayyaa na irraa fudhate jedhee maraachaa ture. Yoo isin afaan keessan bal’aa kana walitti qabanee isinii irraa deemna jettee yaroo TPLF itti dhaadhatu kan isaanii dhiisanii lafa Oromoo fulmachuu qabsoo isaanii duraa godhatanii as bahan.
Akkuma Amhaarri haamilee godhatee Uummata Oromoo tufattu kan godhee inni duraa hojii Kononeel Abiyii fi Obbo Lammaa akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Inni lammaffaa Amhaarrii safartuu OPDO madaaluun qeerroo fi Uummata Oromoo madaalaa jira. Inni sadaffaa OPDO keessaa warri aangoo ol aanaa qaban ilmaan nafxanyyaa warra Afaan Oromoo dubbatan akka tahe ni beeku. Kononeel Abiyi irraa kaasee warri kun lafa jala miseensa Ginbot 7 tahanii hojjechaa jiru. OPDO keessatti Oromoota saba boonnummaa qaban doorsisuu fi hacuucuudhaan akka afaan qabatan godaa jiru.
Warri kun maqaa ABO balleessuun ilmaan Oromoo isaan dura dhaabbatan hundaa hidhaa, ajjeessaa fi lafa irraa duguganii balleessuun hojii isaanii isa duraa tahee jira. Har’a dhumaatii fi rakkinni Oromiyaa keessa jiru kan gaaffa Wayyaaneen bulchituu ol taheera. Uummatn Oromoo heeraa fi seeraa waan jedhamu dhabee jira. Qabeenyi isaanii godhaatti saamama. Dubartoonni fi shamarroonni keenya waloon gudeedamu. Ilmi Oromoo ajjeessamee bishanitti ykn bosanatti irbaata bineesaaf darbama. Manaa fi qoonaan uummata ibidaan gubata. Uummatni keenyaa badaa fi gammoojjii keessaa jireenya gadadoof saxilamee jira.
Kun hunduu tahaa Amhaarri ijaarsa dhiba tokko qabu akka nama tokkotti gurmaa’ee Finfinnee kan isaa godhachaa jira. Tuffii OPDOf qabu kan agarsiisu mootummaa OPDO irratti kan mataa isaa ijaarachuu isaa ti. Finfinnee kan mataa isaa godhachuu irra darbee Oromiyaa guutuu dhuunfachuuf wixxifachaa jira.” Finfinee fi Shawaan hafee Wallaga iyyuu kan Oromoo miti” jedhee namni tokko midiyaa isaanii irratti dubbatee jira. Haamilee irrati haamilee horatnii jiru. Maqaa yakkaa isaan ittiin uummata keenya hin arabsine hin jiru. Uummatni bucuun kun deebisee nu qaanessuuf deema.
Ijaarsota maqaa Oromoo baatanii bobaa OPDO jala seenan achumatti OPDO wajjin dhiisuu qabna. Rakkina uummata isaaniif qabsawwuu irraa afaan kaa’aa OPDO filatan. OPDO keessaas tahe warra kana keessa warri bilisummaa Uummata Oromoo fudhatan yaroon ABO/KFO/WBO/Qeerroo wajjin dhaabbatne Amhaara of irraa faciisuu qabna. Yoo yaroon of irraa hin ittifne malee wareega guuddaa nu gaafachuuf deema. Rakkinni Amhaara inni guuddaan jiraachuu fi eenyummaa saba keenya illee hin fudhatu. Akkam gooneetu warra eenyummaa keenya hin beekne wajjin biyya tokko ijaarannee jiraachuu dandeenya? Har’a akkuma waggaa dhibbaa fi shantamaan darbanii mataa keenya gubaatti isaan baannee jiraachuuf qophii hin qabnu.
Akka hubannaa koo yoo tahe dhaloonni Qeerroo Fi Qarree eenyumaanuu mataa irratti baatee hin jiraatu. Kanaafuu kummaatan dhiiga isaa lolaasee humna Wayyaanee amma funyaan isatti hidhatee jiru harka qullaa of irraa kaase. Humna Amhaaraa nu irratti kaa’ee of ijaaraa jiru kana cabsuuf jalaa ol qulqulleessaa dhufuu qabna. Finfinnee irraa gad hin lolu. Jalaa ol armaan aramamuun Barbaachisaa dha. Suuta suuta of keessaa buqqisaa deemna. Dagaa Horoo ajajaa waraana Abishee Garbaa keessa tokko ture. Erga Abisheen ijifatamee waraana Amhaaraa 80 akka qalabu itti kenname. Dagaa Horoo tokko tokkoo ishee galgala irbaata godhaa jedhee mana Oromoo irra deemee hire. Hunduu kana isaa irrbaata godhatee bule jedhama. Kana malee har’a akka gaafa lola Wayyaane miti. WBO of biraa qabna.
Kana booda waan afaan Amhaaraan barreessame Oromiyaa keessa buqa’ee baduu qaba. Afaan Amhaaran hin bitnu hin gurgurru. Waan kana Amhaaraa tahe ni laganna. Biyya yookan qabu tahe karaa biyya isaanii deemuu itti agrsiifna. Oromiyaa keessa jiraatanii Uummata Oromoo fi waan Oromoon qabu arabsuu hin dhiifama qabu. Mootummaan seeraa fi heera kabachiisuu qabuu of isaafuu hin jiru. Bakka mootummaan hin jiretti uummatni hojii seera ofti fudhachuuf dirqama.
Dhuma dubbii: Finfinnee seeraa fi heeraan, dhugaa fi humnan biyyaa Oromoo ti. Magala Finfinnee fi Oromiyaa jidduu dangaan saramuu bulchinsaaf yoo tahe malee biyya Oromoo akka hiruuf hin taanetti fudhanna. Dhalootni keeya warra biyya fi biyyoo Oromiyyaa taakkuu tokko diinaaf dabrsee kennu miti. Har’as akkuma kaleessa wareegama barbaachisu baasuuf qophii dha.
#DHAADHANNOO #QEERROO #BILISUMMAA #ARSIIRRAA!!
Qabsoon keenya akkuma ittii fufee jira kanaf qabsoon keenya abo fi wbo faana yoo hiriree malee bilisummaan dhugaa wbo qofa akka tahe hin ammana yomuma quba nu qabaadha shiraa #arsii irrati opdon xaxaa jiru hin fudhanu kanaf dhaaba keenya dhugaa abo dha kalee jenne hiidhamaa turee ammale abo dha kan nu gudhiisee jaal nadhii gammadati kanaf imaana isaa galmaan geenya qabsoon isaa karaa irrati hin hafuu isa of bira dhaabun keenya gaddaadha garuu immoo bakka isa wbo jira kanaf wbo jaalana qabsoon keenya akkuma ittii fufee jira kana beeka arsii irrti shira opdo gurra hin qabu!